Usalindile owakhubazeka emva kokujovwa | Isolezwe
Usalindile owakhubazeka emva kokujovwa
Isolezwe / 13 July 2012, 4:25pm /
USIPHESIHLE Mthembu waseHammarsdale ongasakwazi ukuhamba emuva kokuzama ukusoka emtholampilo wangakubo.	Isithombe: PATRICK MTOLO
UKHALA ngokulindiswa umnyama ongenafu umfana (21) okhubazeke emuva kokujova esokwa emtholampilo waseHammarsdale.
USiphesihle Mthembu waseHammarsdale ongasakwazi ukuhamba emuva kokujova ngoMeyi emtholampilo iPeaceville uthe namanje usalinde ukuzwa ngophenyo loMnyango wezeMpilo ngodaba lokulimala kwakhe emuva kokuthi uMnyango uthembise ukuthumela iziphathimandla ezizombheka emuva kokuthintwa kwawo yiSolezwe ngodaba lwakhe.
“Bagcine ukufika ngesonto eledlule ngesikhathi besanda kuthintwa yiphephandaba. Ngesikhathi befika bangitshela ukuthi bazothumela onompilo abazofika bezongifunza iphalishi kepha akuzange kufike muntu,” kusho uMthembu.
Uthe okumxakayo ngalolu phenyo olwenziwayo wukuthi akekho udokotela oseke wathunyelwa ukuzomxilonga.
Useze wangena esibhedlela eMariannhill ngenxa yokugula kanti namanje akekho oseke wafika evela emahhovisi oMnyango ukuzobheka ukuthi akuhambelani yini nesigameko sokujova kwakhe belungisela ukumsoka. UMthembu uthe waphelelwa amandla waquleka ngoLwesihlanu kanti lokhu sekuholele ekutheni asebenzise isihlalo esinamasondo ngoba akasakwazi ukusebenzisa izinduku.
Umhlengikazi osebenza komunye umtholampilo owenza izinhlelo zokusoka ongafunanga ukudalula igama lakhe watshela Isolezwe ukuthi kungenzeka ukuthi uMthembu wajovwa ngomjovo omningi kunalowo owawudingeka noma akajovwanga ngendlela noma waliwa wumjovo.
Izolo, uNkk Penny Dladla woMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal uthe seluphothuliwe uphenyo ngesimo sikaMthembu. Uthe basathumele imininingwane yalo ehhovisi lenhloko yoMnyango wezeMpilo.